Ukuqoqwa «Tales Ural" P. P. Bazhova eside kwaziwa njengendlela Classic kwezincwadi zezingane. Izindaba kufakwe leli bhuku, kunyakaze singubani, bonke ngokuphelele benamandla ezinye amazing magic lasendulo. Eshukunyiswe emhlabeni fabulous Bazhov ungenza yezandla ezithakazelisayo, ikakhulukazi ngempumelelo ubukeka ibhokisi Malachite eyenziwe plasticine.
Yini edingekayo ukuze womshini ipotimende fabulous? Ingabe udinga base - engcono ukuthatha ibhokisi ngesivalo ensikeni noma isipho kwemibhalo. Ungasebenzisa amanye ubudala amabhokisi lwemigexo, kudingeka sokubuyiselwa. Izindonga zangaphandle isiqu, sizobe amboze plasticine. Enough ukuthatha zonke izingcezu ezintathu kwezingxenye imibala ehlukahlukene. Njengoba ibhokisi Hack yethu -malahitovaya ka plasticine, sizodinga i shades oluhlaza, omnyama nomhlophe. Lungiselela wonke amathuluzi adingekayo ukuze ukusebenza nobumba: ebhodini, kushe kanye pin rolling.
itshe Mbumbulu ngebumba: isigaba master
Ngaphambi kokuba uqale, qinisekisa ukubheka ezihlukahlukene izithombe Malachite. Emvelweni leli tshe itholakala colorings ezihlukahlukene imigqa, usula futhi yokuwela isethi shades oluhlaza. Yenza lowo mkhaya uphinde uphile lwamaphethini enjalo kungaba we plasticine evamile kakhulu lokusungula zezingane. Hack akho abheke mnandi, uma uphatha eyolanda isisindo akhombe shades eziningi aluhlaza. Kodwa njengoba isethi ejwayelekile ngokuvamile atholakala yonke imibala 6-12, ibhokisi yethu Malachite ka plasticine zizokwenziwa usebenzisa Emerald impahla, imibala abamhlophe nabansundu (noma brown).
Otschipnite kusuka ezahlukene umbala brusochkov izingcezu ezimbili cishe kulingana, bahlanganise kahle kanye roll kubo. I kwaphumela "amasosishi" ezidingekayo ukusonta ndawonye. Manje uthole amahanisi, Roll ngosizo pin rolling. Odinga ukwenza 2-3 kukhona ukungabi nalutho. I emapheshana okuholela phinda futhi isitaki ngobunono mpahla tube. decor lakho itshe isicishe ilungele - kwakuqoshwe kuphela ahlukaniswe okufanayo workpiece ukujiya amakilabhu, ngoba lokhu kulungile ukusebenzisa wire elincanyana.
amacebiso awusizo nemibono ezithakazelisayo ukubhalisa
Ngakho, sinezinto eziningi izigaba enhle nge amabala ezinemibala. Ingabe omunye uthole ibhokisi yangempela Malachite ngebumba? Indlela yokwenza ulwelwesi isiqu njengoba efana itshe yangempela? Konke ulula: uqala ukugcwalisa ebusweni etholakalayo we izingcezu plasticine. Optionally, ungakwazi ulayishe izithombe noma uyibeke ngendlela engahleliwe. Emkhatsini wetincenye teluhlaka ngabanye kufanele kube khona izikhala.
Malachite Ibhokisi plasticine uyobheka lemvelo uma unama phezu zonke evele Ingaphandle. yezandla ngomumo eyenziwe kufanele embozwe ukuvenisha esobala decor alilimalanga ngesikhathi ukusebenza. Ibhokisi wenziwe plasticine ufanelwe kanye nomklamo ngaphakathi. Obkleyte ngaphakathi esifubeni velvet iphepha lakho, indwangu noma ucwecwe. Ungakhohlwa ukwenza ukukhiya futhi idivaysi lula ukuvulwa.
Senza ingane amabhuzu
Ijezi abantu besilisa, noma kanjani ukubeka komyeni wakhe amahle
Kanjani ukuzenzela okwakho izandla amakhethini lendwangu?
Umphakathi njengoba esimisweni sezenhlalo
Ubuhlungu esiswini give up: ukubaluleka basemtholampilo izimpawu, izimbangela, ukwelashwa
Ukwahlukanisa nenhlabathi futhi izakhiwo zabo ezingokwenyama futhi mechanical
Wezifiki Legal e Spain: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo
Nezikhathi ezibucayi wokukhula kwengane esiswini ngu izinyanga